Twin akakwazi ukushada e Seoul, futhi kulempilo ahlukene
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin akakwazi ukushada e Seoul, futhi kulempilo ahlukene
Ubudlelwano obuphakathi umphefumulo twin kuyinto isiphetho yangempela elinye eqembu ukuheha indlela
ukuze uthole [3500 yen asihlole Mahhala] ukuze izangoma akuhambisani kuphela ngempela abopha kuleli zwe.
of course, ngoba kunengqondo ukuhlangabezana ngokuyisimangaliso kuleli zwe, bahlangane ekugcineni wavakashelwa ngokwahlukana yesikhashana, liphinde ngokuvamile kuholela umshado. Nokho akusiyo lowo kunqunywa, ukwandisa eyabo nomunye, yilokhu uvakashele sihlangane at isikhathi ukukhula komphefumulo.
Nokho, abantu ababili akwanele ukukuhlanganisa ngokusebenzisa ngokuhlukana, ke kumelwe futhi alethe le cala kulempilo ezahlukene. Lokhu, abaphikisi akusho hhayi umphefumulo ayiwele naye, kodwa kufanele sicabange futhi awahlangabezananga izakhi ukuze ixhunywe kuleli zwe. Ngaphezu kwalokho, ukuze umphefumulo twin ngempela omunye, kumelwe azinqobe sizi eside. Uma ungeke ukwazi ukususa ke, isifinyelele ngokwahlukana njengoba yayinjalo ngaphandle Soitogeru ukuphila emshadweni. Ngo
twin Seoul hhayi engcono alibophe kungani
? abantu abangu-2 kungukuthi abopha bengayi, okuyilona elisebenzayo futhi abopha njengoba ngahlangana ukuthuthukisa kunjalo umphefumulo, abantu abangu-2 alibophe ezocatshangelwa ukuze kwenziwe njengoba isinqumo kuNkulunkulu hhayi kakhulu. Hhayi kulindeleke ukuba ngcono nomunye ngokuba ndawonye, ??uma ungakwazi besiya injabulo yangempela, ukhanda kwakuyoba likhiphe umphefumulo abangamawele.
? e ukuze ube futhi
twin Seoul futhi lowo kakhulu funa enye inhlangano, ukulahla imicabango kutati imiqondo ngokusebenzisa izigaba eziningana, kuzomele ukunikeza uthando olungenamkhawulo. Ngakho-ke, ungakwazi ukuncika enye inhlangano noma ngabe kungakanani nomunye ukuheha nomunye kakhulu, ezifana noma sibe nethemba lokuthuthukisa kwaqedwa endaweni akwanele eyabo, abantu ababili abafuna uzakwethu ngobugovu ziyophoqeleka wahamba ngendlela ehlukile . Ingxenye ukuthi angifuni ukubona
twin Seoul unihlukanisile ekuqaleni omunye umphefumulo ukuthi quagmire sibheke, lithi yilona khona, ezifana kukhona isibuko kwenye omunye wabo. Ngenxa yalesi sizathu, ungase ubone ngezinye izikhathi mina ukuthi angithandanga ukubona enye inhlangano. Ngaphezu kwalokho, njengoba ngokuvamile anakho okuphambene ingxenye, zikhona nezinye izimo eziholela a quagmire zisabhekana ukubona ukuthi ingxenye.
Uma uhlangabezana ngokwahlukana ngaphandle ziholela umshado nabantu ababonakala a
uma iwele Seoul cabangela futhi kwaba kwesivivinyo ukuthuthukisa umphefumulo, uyoba nambitha ubuhlungu, ezifana isikhathi idabukile umphefumulo. Ngaphezu kwalokho ukuthuthukisa umphefumulo ngoba liphinde wokufakaza uhlukunyezwe imihuzuko naleli zwe ukuthi ibithwele ekuphileni kwangaphambili, kungase kube buhlungu.
imicabango enjalo, konke nosizi ucije umphefumulo. Lokhu emva kokudabula sizi okungukuthi, ngeke ukuthi ngisho noma umphefumulo eliseduze okusezingeni eliphezulu ntathu njengoba kwakukhona ukwehlukana umphefumulo ayiwele naye, sikhule ezinkulu womuntu.